संस्मरण : हवाई यात्राका रोमाञ्चक क्षणहरु !- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २२, २०७४ नरेन्द्रराज पौडेल
काठमाडौं — ०५८ साल कार्तिक दोस्रो हप्ताको कुरा । गृह मन्त्रालयको खटनअनुसार आफू कार्यरत विशेष प्रहरी विभागको सहसचिवबाट जनकपुरको सिडिओको लागि सरुवा पूर्जी लिएको थिएँ । दुईचार दिन अघिदेखि धाम्मधुम्म गर्दैआएको मौसम हिंड्ने बेला सिमसिम पानीमा परिनत भइसकेको थियो । लौ राम्रै साइत पर्‍यो भन्ठानेर बाटा लागेको, एयरपोर्टको प्रतीक्षालयमा भित्रिएपछि दुइ चार जना अर्धपरिचित यात्रु भेटिए । गफका साथी त खाली भएनन् तर चीसा कुर्सीमाथिको लामो कुराइले जिउ सिताङ्ग बनायो ।
पेटले गाईगुइा गर्दै विद्रोहको तयारी–सङ्केत दिन थाल्यो । समयमै त्यसको सम्बोधन त गर्नै पर्‍यो, नत्र भाँडिएर आन्दोलको हर्कत देखायो भने वीचबाटैमा बिचल्ली हुन के बेर ! ” मन लागिनलागी करबलले महंगो कफीशपमा चुस्किंदै र गफिंदै पट्यारिलो दिनको उराठिलो समय बिताएको थिए । झण्डै सवा घण्टा कुरेपछि बल्ल टर्मिनलबाट बोलावट आएथ्यो । बोर्डिङ पास देखाउँदै ह्वात्त बाहिर निस्किंदा त एकदमै पो दच्कायो जाडोले ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १४:४८
रसुवामा चार राजनीतिक दलद्वारा उम्मेदवारको नाम सिफारिस
आश्विन २२, २०७४ बलराम घिमिरे
रसुवा — जिल्लाका प्रमुख चार राजनीतिक दलले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालले सम्भावित उम्मेदवारको नाम पार्टी केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत सिफारिस गरिसकेको बताए । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवा जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसलले प्रत्यक्षतर्फ मोहन आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ । नेकपा एमालले वर्तमान सांसद जर्नादन ढकालको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको नेकपा एमालेका सचिव विजय लामाले बताए ।
माओवादी केन्द्रले माधव लामिछाने र नयाँ शक्ति नेपालले प्रेम तामाङको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ प्रभात तामाङ, नेकपा एमालले पार्टी अध्यक्ष कर्न्याल तामाङ, माओवादी केन्द्रले पासाङ तामाङ र नयाँ शक्ति नेपालले डिल्ली पौडेल, सेरछोवाङ तामाङ र दावासाङबो तामाङको नाम सिफारिस गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसलले प्रत्यक्षतर्फ बालचन्द्र पौडेल, जनकजीवन उपाध्याय र लेखनाथ अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ । नेकपा एमालेले केन्द्रिय सदस्य माधव अर्याल, माओवादी केन्द्रले इन्द्र गोतामे र नयाँ शक्ति नेपालले तेम्ब्रेल तामाङको नाम सिफारिस गरेको नयाँ शक्ति नेपाल रसुवाका कार्यकारि सदस्य लक्षिन तितुङले बताए । समानुपातिकतर्फ पनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरिसकेका छन् ।